Ukuthuthela Isimo Sezulu MANJE: ezemidlalo njengempi yokulwa nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezindlela eziningi zokulwa nokuguquguquka kwesimo sezulu, kodwa zimbalwa kakhulu ezisebenza kakhulu ukuqwashisa kubantu abaningi njengesinyathelo Ukuthuthela Isimo Sezulu MANJE, umzila wokuhamba ngebhayisikili osukile eSeville waya ekomkhulu le-Climate Summit (COP 22), eMarrakech.
Ithimba lezinhlobonhlobo zochwepheshe abangama-50 abavela ezinkampanini, ezikhungweni nasezinhlanganweni ezizibophezele empini zihlangene ngenhloso eyodwa kuphela yokuthi Dala ukuqwashisa ngawo wonke amadolobha adlulisa ukuthi kubaluleke kangakanani futhi kuphuthuma kangakanani ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu.
Uhambo lunezigaba eziyi-10 futhi luzomboza ngaphezu kwamakhilomitha ayi-1.100. Ekupheleni komunye nomunye wabo, kubanjwa impikiswano phakathi kwabo bonke ababamba iqhaza mayelana nokuguquka kwesimo sezulu. Usuku ngalunye, omunye wochwepheshe bezindaba ukhuluma ngesihloko esihlobene, njengamandla, isibopho sezinkampani, ezezimali noma ukusimama. Ngale ndlela, Bonke labo ababa khona bangafunda, esandleni sochwepheshe, ukuthi yini imiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu nokuthi yini engenziwa ukugwema inhlekelele.
Lolu hlelo, oluhlelwe yiSpanish Network of the United Nations Global Compact kanye no-Iberdrola, lune- ikhasi lewebhu lapho kubikwa usuku nosuku lomzila. Kuphelele impela, ngoba inokuqukethwe okuhlukahlukene, okufana namavidiyo, zemibukiso, ibhulogi, nemibono yabahlanganyeli, phakathi kwabanye. Ukuyifinyelela, chofoza lapha.
USonia Castañeda, umqondisi weBiodiversity Foundation, ugcizelele ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kungumsebenzi ohlanganyelwe nowabantu ngabanye, nokuthiLo mphakathi ohamba ngebhayisikili ukhombisa ukuthi zonke izenzo ezincane, konke ukushaywa unyawo kubalulekile futhi kungasiyisa kude empini".
Ngaphandle kokungabaza, kungumcimbi obaluleke kakhulu, ngethemba, ozosebenza ukwenza abantu abaningi bazi ngokwenzekayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuthuthela Isimo Sezulu MANJE: ezemidlalo njengempi yokulwa nokuguquka kwesimo sezulu